Minimalist maapplication ekupfeka anotenda EFL | Linux Vakapindwa muropa
Minimalist maapplication ekupfeka anotenda EFL
Munguva ye IoT uye zvinopfeka, Vagadziri vazhinji vari kuita kuyedza kukudziridza maapplication matsva emhando idzi dzemidziyo. Neichi chikonzero, vazhinji vanozvimiririra vagadziri uye vanogadzira vanofarira kwazvo izvi zvinhu izvo zviripo uye nezveramangwana. Iwo maapplication ekupfeka, achifunga mashandiro ehurdware akabatanidzwa mune izvi zvishandiso, inofanirwa kunge iine mwenje uye inoshanda sezvinobvira, nekuti simba rakadzikira zvakanyanya kupfuura izvo zvatinogona kuva mune chero smartphone ...
Kana iwe uchirangarira, isu takatotaura kare nezve ELC mune chinyorwa nezve AGL, musangano wakaiswa mukati kana wakadzamidzirwa, asi panguva ino hatichataura nezve iyo Linux inoshanda sisitimu yemota dzakabatana, asi nezve chimwe chirongwa chine chekuita nezvekupfeka uye kambani Samsung, iyo nenzira inogona kupfuura Intel kekutanga mumakore mazhinji semutungamiri muchikamu chema semiconductor kana zvakafanotaurwa zvazadzikiswa, uye zvese nekuda kwekutengesa kweyekurangarira mamiriro eKorea.
Zvakanaka, dzokera kumusoro, EFL ibhuku rekushandisa inoshanda chaizvo mukugadzira zvisingaremi GUI, ndokuti, graphical interfaces yemapurogiramu asingade zvakawandisa zvigadzirwa zvehardware kuti zvishande. Rangarira kuti iyo graphical chimiro ndechimwe chezvinhu izvo zvinoda izvo zvakanyanya zviwanikwa zvehardware kubva kumidziyo. Cedric Bail, anobva kuSamsung, anga achitungamira kuECL (Yakabatanidzwa Linux Musangano) 2017 kupa matipi ekushandisa EFL yevagadziri vanofarira kugadzira maapplication ezvokupfeka zvakajairika.
EFL inomirira Chinojekesa Foundation Raibhurari. EFL inoumbwa nenhevedzano yemaraibhurari akaturikidzana, kubva pasi kusvika padanho repamusoro, zvichibvumira kupinda kune imwe nhanho sezvaunoenda. Ine default API muC uye nemimwe mitauro mauri kushanda. EFL yanga ichishandiswa muSamsung Galaxy Gear, uye zvakare muSamsung Z1, Z2, Z3 uye SUHD smart TV kubva kufemu yeSouth Korea. Mimwe michina kubva kufemu yakamboshandisawo, senge NX300M, NX1, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Minimalist maapplication ekupfeka anotenda EFL
Inowanikwa Emmabuntüs 3 1.04, yakajeka vhezheni yezvikwata zvine mashoma zviwanikwa